जउमाविको स्वर्ण महोत्सव : आएनन् मन्त्री, जिशिअले गरिदिए उद्घाटन ! – ebaglung.com
जउमाविको स्वर्ण महोत्सव : आएनन् मन्त्री, जिशिअले गरिदिए उद्घाटन !
२०७३ पुष १८, सोमबार १३:४८	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७३ पुस १८ । श्री जनता उच्च माध्यामिक विद्यालय अस्लेवा ७ गुल्मीको स्वर्ण महोत्सव आज देखि सुरु भएको छ । स्वर्ण महोत्सवको उद्घाटन सत्र अघि विभिन्न झाँकी सहित प्रभातफेरी कार्यक्रम गरिएको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा स्वर्ण महोत्सव मुल समारोह समितिका संयोजक वलराम अधिकारीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा सहायक प्राचार्य पोषकान्त न्यौपानेको स्वागत मन्तव्य र शिक्षकद्धयः विष्णुप्रसाद पाण्डे र शेरबहादुर कुँवरको सञ्चालन रहेको थियो । स्वर्ण महोत्सव ५ दिन सम्म मनाईदै छ र भोलि पनि विविध कार्यक्रम हुने प्रचार प्रसार उप समितिका संयोजक समेत भएका शिक्षक विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
अमलाचौर गाविसको २५ औ गाँउ परिषद !
गुल्मीमा मतदाता नामावली संकलन सुरु !